Lalao iPlayer: Vadinao: Knights sy Princess aterineto. Play maimaim-poana
Lalao iPlayer: Vadinao: Knights sy Princess an-tserasera
iPlayer: Fitaka Farm
Forge ny Fanjakana Natanjaka
Toeram-pambolena: Ny Nahaliana Atao hoe 2
Toeram-pambolena: Ny Nahaliana Atao hoe
Toeram-pambolena: Ny mahagaga Jelly
Trano Gingerbread zaza Hazel
4.8 1 2 3 4 5 (Total 56)
Nanoroka an-tsaha ny baolina
Basketball nanoroka fatratra
Nanoroka tao amin'ny efitrano fandrian 2
Prince & andriambavy: Kiss fikatsahana
Baby Hazel. Voatabia Farm
Baolina kitra eo amin'ny toeram-piompiana
Voankazo toeram-piompiana: Press sy ny jono
Royal Zaza Kambana Cute Farm
Kogama: 4 Ady
Adama sy Eva 4
Ny tovovavy hipster
Lalao Online fikatsahana lalao Funny Games Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Manoroka Action Online Games Farm Simulations ho an'ny ankizivavy Andriambavy Simulations fiainana Farm iPlayer
iPlayer: Vadinao: Knights sy Princess (Knights and Brides):
Ny tetika ny lalao Vadinao: Knights sy Andriambavy aterineto dia hanana amin'ny lalana samy hafa. Ny iray ho an'ny Knights - ny anankiray kosa fiaraha-monina vehivavy. Knights mahery kokoa mba hiady teo amin'ny kianja filalaovana, ary ny vehivavy mahafinaritra mba hikarakara ny tany sy trano ary ny mpanohana voly isan-karazany goodies.
Dia ho miatrika safidy sarotra. Ny manomboka amin'ny ny firaisana ara-nofo ny toetra amam-panahy sy ny karazana. Afaka ny ho tonga stylish ankizivavy mavitrika sy mahafatifaty ary vehivavy mpanankarena. Ny tanora dia afaka misafidy ny tsara na sahisahy Knights. Avy amin'ny olona iray fidinao miankina amin'ny lovanao, izay amin'ny farany dia tsy maintsy hisokatra amin'ny ho avy. Play Vadinao: Knights sy Andriambavy azonao atao amin'ny roa, ary irery. Taty aoriana, ny mpivady, dia afaka mahita azy foana. Rehefa naniraka ny Knight hiady sy manamasina izany ny vehivavy, dia Mamaly soa azy tamin'ny fanomezana. Fa raha ny fiaraha-monina ny vehivavy hitondra Knight matsiro namboarina lovia, ny heriny nitombo imbetsaka, manome vintana kokoa mba hahazo ny lalao.
Koa, tsy maintsy hampitombo fambolena mba hamahanana biby isan-karazany, vokatra hanao trano ary ny maro hafa.
iPlayer Mivadika Amin'ny Vadinao: Knights sy Andriambavy tanteraka ho an'ny fialam-boly. Ny lalao dia tena maro loko, ary manana feo tsara nanaovana. Mahita namana ary hifindra amin'ny fikatsahana fahafaham-po sy ny asa fitoriana mahafinaritra miaraka. Azonao atao ny mividy zavatra fanampiny avy amin'ny lalao fivarotana, fa ny voly araka ny lazainy mila mandoa lafo.